Dameen mana fayyaa kutaa Iowa akka himetti sa’aati 24 keesati sababa COVID-19 namni haarawa du’e 3
Published June 19, 2020 at 7:54 PM CDT
Dameen mana fayyaa kutaa Iowa akka himetti sa’aati 24 keesati sababa COVID-19 namni haarawa du’e 3 yoo tau akka waliigalaatti Iowa keessati namni due 681 gahuu gabaasan. Namni dabalataan qabame 400 yoo ta’u waliigalatti namni qabame 25,300 gaheera.
Websiten Corona Virus kan Iowa odeeffannoo dhukubaa hordufuuti kan jiruu yoo ta’u odeefannoo haarawa namoota qabaman harkii 71% akka dhukubaa biraa qaraa qabaan mullisa.
Manni fayyaa Sioux land akka gabaasetti namoota harawaa qorataman 134 keessa namni 6 qabaachu himan, Waliigalatti magaala Woodbury County keessati namni qabame 3,052 yoo ta’u kan du’emoo 42 dha.
Manni fayyaa Dakota County akka gabaaseti namni haarawa 5 kan qabame yoo ta’u, waliigalatti namni qabame 1,751 kan du’emmoo 33 dha.
Magaalan Nebraska namni haarawni 6 du’uu gabbaaste, kun immoo hanga dhukkubichi jalqabe namni du’e 240 mullisa.
Nebaraska keessatti State officiali namni hanga ammaa qabamee 17,000 ol (17,415) ta’uu himan.
Nebraska keessati hojiidhadummaa kan gutame biyya irra xiqqaatti akka Amerikaa guttuti, May keessa 5% qoffaa. National retiin harka 13% olii. Hojiidhabdummaan kan Iowa keessa harka 10%, Akka wayta April irraa gad Xiqqaate garuu ammas guddama. Waggaa tokko dura 2.7% ture.
Ummanni Iowa dhukkuba Kanaan waluma dorgomaa jiranii, Kutaan Iowa ummataaf qarqaarsa bilaasha karaa bilbilaa yookin videotin qaarqasa foyyee Kanaan nama qarqaaru jirani, warri gorsaa ummata Iowa beekumsa isaanittin akka jiruu ufii bakkatti deefatan qarqaaru.
Afaan ispaanishaas nijira, gorsitooni kara hojjatoota biraatis dabarsuu nimala. Jiraattonii Iowa hundi iowa dot-org deemun gorsaa covid-19 irratti bilaashan ni argatuu nidanda’ama.
Governor south Dakota Kristi Noemo guyyaa afrikaan ameerikan yookin dhalataa Amerikaa kaa dhiigni isaani afirca ykn gurachaa gabrummaa jalaa bahan yaadachuuf Guyyaa har’aa Juneteenth Day jedhanii beeysisaniiru.
Akka labsiin state kana keessatti himametti akka ba’aati ayyaana kana akka ayyaanota biraa akka ta’e kabajuu hin murteesine.
Dubbataan governor, akka jedhetti kana gochuu kan danda’u seera kan baasu qofaadha.
Legislation kan demokraatota ayyaana kana yeroo itti aanu akka ayyaana biyyaa ta’ee ayyaanefatamuu gochuuf karoorfataniiru.
Local NewsLocalIowaWoodbury CountyNebraskaSouth DakotanewsDakota CountyJuneteenthunemploymentSouth Dakota Governor Kristi NoemCOVID-19Oromo
Manni fayyaa Dakota County akka himeeti sababa covid-19 namni tokko du’uu himan, waliigalatti namni du’ee 32 gaheera. Ammas saalaa fi umriin nama du’ee…
Counties Iowa Northwest 2 sababa covid-19 sa’ati 24 keessatti namni 2 du’uu gabaasan
Counties Iowa Northwest 2 sababa covid-19 sa’ati 24 keessatti namni 2 du’uu gabaasan. Dubartooni 2 umrii isaani 61-80 jidduu jiruu magaala Woodbury county…
Damee fayyaa magaala Sioux City naannawa metro argamu namni muraasni covid-19 akka qabame guyyaa
Damee fayyaa magaala Sioux City naannawa metro argamu namni muraasni covid-19 akka qabame guyyaa harbaa kana gabaase.Duuti haarowni hin jiruu. Magaala…
Manni fayyaa department akka jedhetti, Winnebago guyyaa Kamsaa namni 2 dabalataan sababa covid-19 du’uu isaani himan, waliigalati Winnebago reservation…